Nagarik Shukrabar - प्रविधि
मङ्गलबार, २५ मङि्सर २०७५, ०१ : ५७
मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न एप
शुक्रबार संवाददाता ,बिहिबार, १३ पुष २०७४
बढ्दो बालबलिका तथा चेलिबेटी बेचबिखन न्यूनीकरण गर्न बेचबिखनमा संलग्न दलालको अनुहार पहिचान गर्ने एप्स सुरुवात गरिएको छ । शुक्रबार माइती नेपालले ‘खोजी’ एप्सको सुरुवात गरेको छ । बर्सेनि ५ हजारदेखि १० हजार महिला तथा बालबालिका नेपालबाट बेचबिखनमा पर्ने समस्या रोक्न यस एप्सले सहयोग गर्ने विश्वास माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाको छ ।
नयाँ टाटा टिगोर बजारमा
नेपालका लागि टाटा मोटर्सको अधिकृत वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले आइतबार प्यासेन्जर गाडी नयाँ टाटा टिगोर सार्वजनिक गरेको छ । टाटा टिगोर पेट्रोलबाट चल्ने सेडानको न्यूनतम मूल्य २७.५५ लाख (१.२ लिटर रेभोट्रन) पर्ने र टाटाका सबै आधिकारिक बिक्री केन्द्रमा उपलब्ध हुने कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ
मोबाइल हबमा एक्सचेन्ज र किस्ताबन्दी अफर
ग्याजेट पारखीले मन परेको मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरा, आइफोन, आइप्याड, म्याक लगायत उत्पादन किस्ताबन्दीमा किन्न पाउने भएका छन् । सिटिसी मल सुन्धारामा रहेको सिटिसी मोबाइल हबले मंसिर २० गतेदेखि सञ्चालन गर्ने मोबाइल तथा ल्यापटप मेलामा यस्तो सुविधा रहेको जनाएको छ ।
प्रविधिको लत : इन्स्टाग्रामले ल्याउँछ मानसिक समस्या
फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा मानिसलाई उत्तेजित पार्ने, डर, चिन्ता, घृणा उत्पन्न गर्ने किसिमका फोटो पोस्ट गरिएको हुन्छ । त्यसले मानिसलाई डिप्रेसन समेत गराउँछ । सामाजिक सञ्जालमध्ये इन्स्टाग्रामले बढी मात्रामा मानसिक समस्या ल्याएको देखिन्छ ।
सञ्जालमा नयाँपुस्ता : बिगोमै लभ, बिगोमै ब्रेकअप
फेसबुकमा प्रिन्सी युजर नेम बनाएकी एक युवती बिगोमै चिनजान भएका लिबरन युजर नेम बनाएका युवकसँग केही महिनादेखि गहिरो प्रेममा छिन् । उनीहरु हरेक दिन बिगोमा भिडियो र अडियो च्याट गर्छन् ।
प्ले स्टोर परिवर्तन हुँदै
गुगलले एप डेभलपर्सहरूलाई एक सूचना जारी गर्न सुरु गरेको छ । सन् २०१९ बाट गुगलको प्ले स्टोरमा एप्सका ६४ बिट भर्सन मात्र तयार गर्नका लागि गुगलले आग्रह गरेको छ । थाहै छ कि गुगलले एन्ड्रोइड ५ ललिपप अपरेटिङ सिस्टम लञ्च भएसँगै एन्ड्रोइड फोनले ६४ बिटका एप्स सपोर्ट गर्न थालेको थियो ।
म्यासेन्जर किड एप बच्चाका लागि खतरा
फेसबुकले बच्चाहरूको लागि भनेर नयाँ च्याटिङ एप ल्याएको छ । ‘म्यासेन्जर किड’ नाम दिइएको यो एप फेसबुकले ६ देखि १३ वर्षका बच्चाहरूले प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ । बच्चाहरूसँग हरेक समय स्मार्टफोन र इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै गएकाले सोसल मिडियाका विभिन्न प्ल्याटफर्महरूले बच्चालाई आर्कषण गर्न सुरु गरेका छन् ।
नयाँ सौर्यमण्डल कस्तो छ ?
अमेरिकाको अन्तरिक्ष खोज एजेन्सी नासाले हालै नयाँ सौर्यमण्डलको आठौँ ग्रह पनि फेला पारेको छ । यो नयाँ सौर्यमण्डल हाम्रै सौर्यमण्डल जत्रै रहेको अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । हाम्रो सौर्यमण्डलभन्दा बाहिर खोजिएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सौर्यमण्डल हो । केप्लर ९० सौर्यमण्डलको यस आठौँ ग्रहलाई केप्लर ९० आई नामकरण गरिएको छ ।
२५ वर्षभन्दा कमका युवा कन्डम प्रयोग गर्दैनन् किन ?
बेलायतका १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवा केटा यौन सम्बन्ध राख्दा कन्डोम प्रयोग नगर्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । त्यसैले उनीहरुले कण्डोम प्रयोग बढाऊन् भनेर बेलायती सरकारले विशेष अभियान नै सुरु गर्न थालेको छ । यौन स्वास्थ्यका सन्दर्भमा बेलायत सरकारले गएका आठ वर्षयता पहिलो पटक यस्तो अभियान सुरु गरेको हो ।खासमा बेलायती सरकारले गरेको सर्भेमा १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका आधाभन्दा बढी केटाले यौन सम्बन्ध राख्दा कन्डोम प्रयोग गर्दैनन् भन्ने देखिएको थियो ।
जनवरीमा सामसुङले एस ९ सार्वजनिक गर्दै
स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी सामसुङले ग्यालेक्सी एस सिरिजको नयाँ मोडल एस नाइन र एस नाइन प्लसको सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सामसुङका आधिकारिक विभिन्न कम्पनीहरूले आगामी जनवरी महिनामा उक्त मोडलका स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । एस नाइन प्लसमा ड्युल क्यामारा सेटअप र एस नाइनमा भन्दा बढी र्याम राखिएको छ ।
सगुनले स्मार्टकार्ड ल्याउँदै
सामाजिक सञ्जाल सगुनले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई नाफा बाँड्ने र आर्थिक उपार्जन गर्ने दाबी गर्दै सोसल स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने भएको छ । सगुनले विश्वभरका आफ्ना प्रयोगकर्तालाई उनीहरुले बिताएको समयको मूल्य दिने दावी गर्दैयो योजना अघि सारेको छ । कम्पनीकाअनुसार आफ्ना प्रयोगकर्तालाई सगुनले सोसल स्मार्ट कार्ड दिनेछ ।
फेसबुक म्यासेन्जरका दस विशेषता
च्याट गर्ने सजिलो माध्यम अहिले फेसबुकको म्यासेन्जर बनेको छ । फेसबुकले आफ्नो लोकप्रियतासँगै एकअर्कासँग कुरा गर्न सजिलो होस् भनेर म्यासेन्जर एप ल्याएको थियो । जुन अहिले फेसबुकका अधिकांशले प्रयोग गर्छन् । हामीले अडियो, भिडियो च्याट गर्नका लागि फेसबुकको म्यासेन्जर प्रयोग गर्दै आएका छौं । म्यासेन्जरले त्यसबाहेक के के सुविधा प्रदान गरेको छ ? भन्नेबारे हामीले कहिले सोधीखोजी गर्दैनौं ।
फेसबुकलाई टेनसेन्टको टक्कर
अमेरिकन कम्पनी फेसबुक र चिनियाँ समाजिक सञ्जाल कम्पनी टेनसेन्टबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । विश्लेषकहरुले फेसबुकलाई चिनियाँ कम्पनी टेनसेन्टले उछिन्न सक्ने प्रक्षेपणहरु गर्न थालेका छन् । चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल र भिडियो गेम कम्पनी टेनसेन्टको मूल्य गत वर्ष दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएसंगै प्रतिस्पर्धा बढेको हो ।
ट्विटरमा भेरिफिकेसन रोकियो
ट्विटरले आफ्ना प्रयोगकर्ताको अकाउन्ट भेरिफिकेसन गर्ने फिचरलाई तत्कलका लागि बन्द गरेको छ । यसअघि जो कोहीले पनि आफ्नो अकाउन्टलाई भेरिफाइ गर्न निवेदन दिन सक्थे । यसअघि यो केवल सेलिब्रेटी, सरकारी तथा मिडयासँग सम्बन्धित मानिसहरुका लागि मात्र उपलब्ध थियो ।
युट्युबको नयाँ फिचर
एन्ड्रोइड स्मार्टफोनका लागि युट्युबले ‘पिन्च टु जुम’नामक नयाँ फिचर ल्याएको छ । यो फिचरको सहयोगले स्मार्टफोनको पूरै स्क्रिनभर भिडियो देखिन्छ । अर्थात् किनारामा देखिने कालो धर्सो अब हेर्नुपर्ने छैन । यो नयाँ फिचरले १८ः९ स्क्रिनवाला स्मार्टफोनमा समेत काम गर्ने बताइएको छ ।
सेट टप बक्स के हो ? कति पर्छ मूल्य ?
सरकारले कात्तिक २९ गतेदेखि धमाधम एनालग केबल टिभी सिग्नल बन्द गराइरहेको छ । पहिलो चरणमा विभिन्न महानगरपालिका क्षेत्रलाई डिजिटलाइज गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले एनालग केबल टिभी सिग्नल बन्द गराएको हो । यस्तो अनुगमनको कार्य निरन्तर जारी राख्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
ह्वाट्सएपले ल्याउँदैछ ढाँट्न नपाइने फिचर
तपाइँको मोबाइलमा घण्टी बज्छ । अल्छी मान्दै फोन उठाउनुहुन्छ । ह्वाट्सएपमा साथीको मेसेज रहेछ, ‘मित्र, कहाँ पुगियो ?’ । तपाइँ जवाफ दिनुहुन्छः बाटोमै छु, २० मिनेटमा पुग्छु । त्यसपछि तपाइँले फोन सिरानीमै थन्काएर, पुनः गुटुमुटु परेर सुत्नुहुन्छ । तपाइँको पनि केही यस्तै बानी छ भने सतर्क हुनुहोस् ।
ओपोले नयाँ सेल्फी एक्स्पर्ट ल्याउँदै
ओपो मोबाइलले नेपाली बजारमा नयाँ सेल्फी एक्स्पर्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिकको तयारीमा रहेको ओपोको नयाँ फोन नेपालमा ब्राण्डकै पहिलो फुल स्क्रिन मोडल हुनुका साथै यसमा नेपाली सेल्फी प्रेमीलाई विशेष ध्यानमा राखि उद्योगकै पहिलो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सी (एआई) प्रविधि उपलब्ध गरिएको छ ।